Dumarka la waxyeeleeyay marar badan waxay sameeyaan waxyaabahan 7 (iyaga oo aan xitaa garanaynin!) - CAAFIMAADKA MACLUUMAADKA MAGAALADA - RAJO
ACCUEIL » QODOBO Dumarka la waxyeeleeyay badiyaa waxay sameeyaan waxyaabahaan 7 (iyadoon ogayn!) - SANTE PLUS MAG
Dumarka la waxyeeleeyay marar badan waxay sameeyaan waxyaabahan 7 (iyaga oo aan xitaa ogayn!) - CAAFIMAADKA MACMIILKA
Dumarka la waxyeeleeyay marar badan waxay sameeyaan waxyaabahan 7 (iyada oo aan xitaa ogayn!)
Dhibaatada niyadeed waxay noqon kartaa mid aad u xun. Inta badan, waxaan abuuraa caqabado si aan nafteena u ilaalino oo aan uga badbaado kalsoonida nafteena. Mararka qaar waxay qaadan kartaa waqti dheer oo aan ku noqon karno dareen maskax ahaan iyo in aan iska fogeyno kuwa doonaya inay nagu soo dhawaadaan. Kuwani waa badi fikrado naloo xakameyn kara waxyaabo qurux badan oo la nool lamaane kale. Waa kuwan 7 waxyaabo ay haweenku sameeyaan marka ay aad u niyad jabiyaan jacaylka.
a dillaac wuu na wareegi karaa wax walba iyo wax walba. Mararka qaar waxay dhacdaa in aynaan aqoonsan midba midka kale oo aan si taxadar leh u eegno oo aan kalsooni ku qabno kulankeena cusub. Miyir-qabnimadeena mararka qaar waxay naga dhigtaa dabeecadaha naga horjoogsan kara xiriir wanaagsan oo caafimaad leh. Halkaan waxaa ah akhlaaqda 7 ee aan lahaan karno marka aan waxyeeleyno jacayl badan.
1- Wax walba waad ka shakisan tahay
Dhammaan waa cudurdaar kufsi ah in laguu diido adigoon kugu kalsoonayn ama shaki ku jirin. Waxaad u maleyneysaa in qof kasta oo daneynaya uu leeyahay fikrado oo uu rabo inuu ku wato waqtigaaga. Xilligaagii hore wuxuu kaa dhigay dhaawacyo aad u badan oo aadan fileynin in qofku uusan noqon mid khatar ah ama daacad ah. Nasiib daro, waxay kugu dhici kartaa si aad u roonaato ragga macnaha leh.
2 - Aad aad u xun
Waxaad marwalba aragtaa hal mar madow oo madhan. Aad uga shakisan yahay, waxaad inta badan diirada saareysaa khaladaadka dadka ka soo jiidaya waddada adiga oo aan su'aalo waydiin. Dhibaatadaada shucuureedu aad bay u qoto-dheer tahay in aad mashruuc ku samayso riwaayadahasaaxiibadaa. Dhibaatooyinkaaga xun ayaa kaa dhigay qadhaadh oo dhan wax waliba waxay noqon kartaa mucjiso si loo joojiyo ama looga cararo xiriirka. Cabsida dhaawaca waa mid aad u xoog badan oo aanad haysanin wax ku saabsan bixinta wax walba.
3 - Waxaad aqbashay murugo sidii aad u qalanto
Waxaad ku soo gashay maskaxdaada inaadan u qalmin inaad ku faraxdo. Taasi waa sababta, inta badan, waxaad qaadeysaa ciqaabta ah inaadan sameynin shirar fiican. Waxaad ku dhowdahay in aad u qalantid inaad kali noqotid oo aadan la wadaagin daqiiqado mudnaanta leh qof. Murugadaadu waxay noqotaa "aamusnaantaada" waxaadna ka welwelsan tahay inaad u ogolaato farxad inuu ka mid noqdo noloshaada. Dhibaato ayaad u geysatey inaad doorbidid farxad halkii aad ka heli lahayd niyad jab.
4 - Jacaylku ma aha qayb ka mid ah ereyadaada
Sheekada jacaylka Wax yar oo aad u yar! Waxaad leedahay aragti ah in aad soo martay adigaa. Waxaad fiirineysaa labada lamaane ee gacanta ku haya wadada, waxaadna sheegeysaa in ay si dhaqso ah u soo galaan. Waxaad ku adkaysatay sheeko jacayl aadna aad ugu raaxeysantahay xaaladan. Xaqiiqdii, xitaa kama fikirinjeclahay sida haddii ay ahayd raaxo aadan hadda xaq u lahayn. Marka qofku kugu amro, waad ka shakisan tahay oo shaki kaaga jiro daacadnimadiisa.
5 - Waxaad sirtaada u haysaa sirtaada
Waayo-aragnimadii hore iyo xanuunkaaga ayaa kugu baray inaadan is-dhiibin. Waxaad doorbideysaa inaad iska aamusnaato oo aad ka baqeyso inaad ka hadasho dareenkaaga dareenkaaga. Cabsidaada? U ogolow qof inuu kuu isticmaalo inuu kuu waxyeelo. Sidaa darteed, waxaad u jajaban tahay aamusnaan buuxda oo qarsoodi ah iyo qadhaadh. Dadka doonaya inay noloshaada ku soo galaan, waxaad tahay qof caadi ah. Taas bedelkeeda, aad ayaad u dareentaa in dabeecaddani ay tahay farsamo difaaca.
6- Jacayl ha u qaadin si dhab ah
Kooxahaada asxaabtaada, waxaad tahay qofka keliya ee shaqada ku jira, adiguna waad ku qosli kartaa. Adigu waad ka xishooneysaa mawduucaan iyo xitaa inaad ku wacdiyeysid daa'imid weligeed ah kuwa ku hareeraysan. Adiga kaliya, kaligaa keligaa ayaa ah sida ugu wanaagsan ee aad u badbaadin karto welwelka aad ku yeelan lahayd xiriirka.
7- Waxaad leedahay rajo rajo
Inkasta oo ay sidan oo kale tahay, aadan si buuxda u jahwareersaneyn. Waxaad rajeyneysaa in maalin uun qofka saxda ah uu ka gudbo waddadaada. Qofkii ogaan doona sida loo adkeyn lahaa inkastoo uu xitaa qolka culus, wuxuu kaa dhigi doonaa qosol la'aan adigoon ku qancin iyo dareenkiina. Waxaad rajeyneysaa in maalin uun in aad ka gudubto jidka qofka dhaawici doona nabarkaaga wuxuuna ku siin doonaa rajo jacayl.
Talooyin | Bhmag
Cameroon: Elimbi xuubka ku celiyay isbahaysiga, "Waxaan ka codsanayaa siyaasiyiinta daacad ah oo is-hoosaysiiya ..."
France Télévisions waxay heleysaa xuquuqda furan ee JO-2024 ee Paris
DADKA & LIFESTYLE3,121